PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: November 2012
Posted by PNSjapan at 2:29 PM0comments
လက်ပန်တောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း (လုံးဝ) ဖျက်သိမ်းရေးကန့်ကွက် ဆန္ဒပြပွဲ
လက်ပန်တောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း (လုံးဝ) ဖျက်သိမ်းရေး နိုင်ငံသားတိုင်း ( လူတဦးချင်း ) မှာတာန် ရှိတယ် တိုက်ပွဲတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ကြပါ။
လက်ပန်တောင် ကြေးနီစီမံကိန်း (လုံးဝ) ဖျက်သိမ်းရေးကို ဆန္ဒပြပွဲတွင် သံဃာတော်များနှင့် ပြည်သူများကို မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့က မီးခိုးဗုံးများဖြင့် ဖြိုးခွင်းခဲ့ခြင်းအား ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြပွဲကို အောက်ပါအတိုင်း ကျင်းပမည် ဖြစ်ပါသောကြောင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ကြပါရန်-
(သောကြာနေ့) အချိန်။ ။ ညနေ-၃-နာရီ မှ ၄-နာရီအထိ။
နေရာ။ ။ရှင်နာဂ၀ါ-မြန်မာသံရုံးရှေ့  ။ ဂျပန် တိုကျို ။
Copy from - demowaiyan.org
Posted by PNSjapan at 8:40 AM0comments
မျက်ရည်ယိုဗုံးတွေ ကြားမှာ ဖြတ်သန်း လာခဲ့တာပါ ... ဘာမှ မီးလောင်စရာ အကြောင်း မရှိဘူး ...ဘယ်သူ့အမိန့်နဲ့ ဒီလက်နက်တွေကို သုံးတယ် ဆိုတာရယ် စုံစမ်း ဖော်ထုတ်ဖို့ အရေး ကြီး....
လက်ပံတန်းတောင် သပိတ်စခန်းများအား အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းခဲ့မှုအပေါ် ၈၈မျိုးဆက် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်၏ တုန့်ပြန်ချက်
''မျက်ရည်ယိုဗုံးနဲ့ အဓိကရုဏ်းကို ဖြိုခွင်းတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင် အတွေ့အကြုံ များစွာ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ကြိမ်ဖန်များစွာ မျက်ရည်ယိုဗုံးတွေ ကြားမှာ ဖြတ်သန်း လာခဲ့တာပါ။ ဘာမှ မီးလောင်စရာ အကြောင်း မရှိဘူး။ အဲဒီတော့ နိုင်ငံတကာ နှုန်းတွေ၊ ဘာတွေလို့ ပြောနေတာထက် ဘယ်လက်နက်တွေ သုံးစွဲခဲ့သလဲ ဆိုတာရယ်၊ ဘယ်သူ့အမိန့်နဲ့ ဒီလက်နက်တွေကို သုံးတယ် ဆိုတာရယ် စုံစမ်း ဖော်ထုတ်ဖို့ အရေး ကြီးပါတယ်။
ဒီဗုံးက အရင်ဗုံးခွံဆံနဲ့ အမျိုးအစားခြင်းမတူတာလား အကုန် ပေါက်ကွဲသွားတာကြောင့် ပွင့်ထွက်သွားတာလား။ တစ်မျိုးတည်းသော ဗုံးကိုပဲ သုံးတာလား တခြားဗုံးအမျိုးအစားတစ်ခုရော သုံးသွားတာလား စဉ်းစားစရာဗျာ။ By -Aung Nay Myo
Is it White Phosphorous grenade? please check below links to confirm. There are two kinds of grenade, incendiary and smoke. (credit to original photographer/ by -Nay Myo Zin
အဲဒီ စုံစမ်းဖော်ထုတ် ဖို့ဆိုတာလည်း စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်တစ်ရပ် အမြန်ဆုံး ဖွဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီကော်မရှင်ကလည်း လွတ်လပ်တဲ့ ကော်မရှင် ဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီလို မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မဖြေရှင်းဘူးဆိုရင် နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာမယ့် အကျိုးဆက်တွေအတွက် အင်မတန် စိတ်ပူစရာလည်း ကောင်းပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ နောက်ကြောင်းပြန်မလှည့်ရအောင် အားလုံးဝိုင်းပြီး သတိထား နေတဲ့အချိန်မှာ မဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းတည်းက ကျွန်တော်တို့ ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ ကြေးနီစီမံကိန်းကိစ္စကို အင်အားသုံး အကြမ်းဖက်ပြီး မဖြေရှင်းဖို့ ပြဿနာကို စေ့စပ် ဆွေးနွေးပြီးတော့ အဖြေရှာကြဖို့ သဘောထားထုတ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ အခုဟာက ဘယ်လိုပဲပြောပြော ဆန္ဒပြသူတွေ မီးလောင်ပြီး ဒဏ်ရာရရှိမှု တွေ အကြီးအကျယ် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။
ဒီကိစ္စမှာ တရုတ်ကိုချည်း ပဲ ရည်ရွယ်ပြောလို့ မရဘူး။ နောက်ထပ်သူ့ရဲ့ တွဲဖက်ပါတနာ အကျိုး စီးပွားဖက်ဖြစ်တဲ့ ဦးပိုင်၊ ဦးပိုင်က ဘာလဲ၊ ဘယ်သူလဲ ဆိုတာလဲ လူတိုင်းသိတယ်။ ဆိုတော့ တရုတ်ကို မလွန်ဆန်နိုင်ရုံတင်ကရဲ့လား။ အဲဒီ ဦးပိုင်ကြီးကို မလွန်ဆန်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ ပြဿနာ ကျွန်တော်တို့ အတွေးထဲမှာ ရှိပါတယ်။ ပြည်သူ အားလုံးကလည်း ဒီမေးခွန်းကို ထုတ်နေတယ်။
မုံရွာခရိုင် ၊ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မိန့်ခွန်း
မုံရွာခရိုင် ၊ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် ၊ ကံကုန်းကျေးရွာတွင် နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ ညနေ ၆ နာရီခန့်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မိန့်ခွန်းပြောခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မုံရွာခရိုင်၊ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် ကန့်ကုန်းကျေးရွာတွင် နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ ညနေ ၆ နာရီခန်
Photo by -7Day News
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က “ကိုယ်လုပ်ချင်သလို လုပ်လို့ မရဘူး။ အများနဲ့ ညီအောင်လို့ အများ ကောင်းကျိုးအတွက် တစ်ခါတလေ ကိုယ့်ရဲ့ အကျိုးကို အနောက်မှာ ထားပြီးတော့ လုပ်ရတယ်။ အဲဒီလို လုပ်မှသာ တိုးတက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဒေသမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခက်အခဲတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျွန်မတို့ဟာ နိုင်ငံကြီးသား အမြင်နဲ့ ဖြေရှင်းရမယ်။ ကျွန်မတို့ နိုင်ငံကို အပြစ်မရှိတဲ့ နိုင်ငံ၊ အပြစ်မဲ့တဲ့ နိုင်ငံ၊ ကမ္ဘာက လေးစားတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်အောင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ၊ ဘယ်လို နေမလဲ၊ ဘယ်လိုထိုင်မလဲ။ ဘယ်လို ပြဿနာတွေကို ကိုင်တွယ်မလဲဆိုတာ ကျွန်မတို့ ဆုံးဖြတ်ရလိမ့်မယ်။” ဟု ဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“ကျွန်မက ပြည်သူကိုတစ်ခုပဲ တောင်းပန်ချင်ပါတယ်။ သေသေချာချာ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ကျွန်မဘယ်လိုပဲ ဆုံးဖြတ် ဆုံးဖြတ်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်တော့ မချသေးဘူးပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မ တစ်ဖက်ကိုတော့ မေးကြည့်ပြီးပါပြီ။ လုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကို တွေ့ပြီး သက်ဆိုင်ရာ ရွာသူရွာသားတွေနဲ့လည်း တွေ့ချင်တယ်။ ကန့်ကွက်တဲ့ ပြည်သူတွေနဲ့လည်း တွေ့ချင်တယ်။” ဟု ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းလည်း သိရသည်။
ဒါ့အပြင် “ဟိုဘက်ဒီဘက် အဖြေ နှစ်ခုကို ကြည့်ပြီးတော့ တတ်နိုင်သလောက် ပြေလည်အောင်လို့ ကျွန်မ ညှိပေးချင်တယ်။ အဲ့လို ညှိပေးတာကို ပြည်သူတွေက သဘောတူရဲ့လား။” ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြည်သူများကို မေးမြန်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Copy From - BurmeseHearts
နိုဝင်ဘာလ(၂၉)ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက လက်ပံတောင်းတောင် သပိတ်စခန်းအား အင်အားသုံး ဖြိုခွင်းစဉ် ဒဏ်ရာရရှိသော ရဟန်းသံဃာများအား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မုံရွာမြို့ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့လာရောက် တွေ့ဆုံအားပေး စကားပြောကြား။
မီးလောင်ဗုံးများနှင့်ပစ်ပြီး သပိတ်တပ်ဖြိုခွဲရန် နေပြည်တော်မှ ညွှန်ကြားခဲ့ဟုသိရ....
သိန်းစိန်၏ ပကတိရုပ်photo by - Thit Sar's photo.
မေတ္တာပို့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုနေကြသည့် ရဟန်းသံဃာတော်တွေကို လက်နက်ကိုင် သူပုန်စခန်းဝင်စီးသလို အချိန်မတော် အလစ်ဝင်ပြီး အကြမ်းဖက်တာ လူမဆန်တဲ့ လုပ်ရပ်ပါ... အလွန်စိတ်ထိခိုက်ပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရှုတ်ချကန့်ကွက်ပါတယ်....
လက်ရှိအစိုးရ ရဲတပ်ဖွဲ့ နိုင်ငံတကာ ရာဇ၀တ်မှုအကြီး ကြီးတစ်ခု ကျူးလွန်လိုက်ပြီ ...ဖြေရှင်းရလိမ်မယ်
သပိတ်စခန်းကို လုံထိန်းတွေ စတင်ဝင်ရောက် စီးနင်းစဉ်
လက်ပံတောင်းကြေးနီစီမံကိန်း ရပ်တန့်ရေး သပိတ်စခန်းများ အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းခံရ
၂၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂။ မနက်(၃)နာရီ မြင်ကွင်း
ယမန်နေ့ အာရုဏ်တက်ချိန်တွင် လက်ပန်းတောင်းတောင် သပိတ်စခန်းများအား မီးလောင်ဗုံးဖြင့် ဖြိ်ုခွင်းရာ
သံဃာတော်များနှင့် ရွာသူရွာသားများ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး မုံရွာပြည်သူ့ ဆေးရုံတွင် ၄င်းတို့ကို ဆေးကု ပေးလျက်ရှိသည်။
ယခုပစ်သော ဗုံးမှာ မီးခိုးဗုံး အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ယင်းဗုံးတွင် ဖော့စဖိတ် ပါကြောင်း၊ ယင်းမှာ ရေနှင့် ထိပါက အသားပိုပြဲကာ ပိုမိုပြင်းထန်စေကြောင်း၊ ပထမဖြိုခွင်းမှုအဖြစ် ရေဖြင့် စတင်ပက်ခြင်း ဖြစ်ရာ ရေနှင့်ပက်ပြီးနောက် ယင်းဗုံးကို မသုံးသင့်ကြောင်း ဒဏ်ရာရသူများကို ဆေးကုသပေးနေသော မုံရွာဆေးရုံမှ ဆရာဝန်တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
မန္တလေးဆေးရုံရောက်လက်ပံတောင်းတောင် သပိတ်စခန်းမှဆရာတော် ဆေးကုသမှုခံယူနေ
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း နှင့် ပတ်သက်၍ ဆန္ဒပြသပိတ်စခန်းများ ကိုဖြိုခွင်းခဲ့ရာ တွင် သံဃာတော်(၃)ပါး အပြင်းအထန်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ကြောင်း မုံရွာ ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် ဆေးကုသမှုခံ ယူနေသော သံဃာတော်များထံမှ သိရသည်။ ယနေ့နံနက် ၅ နာရီတွင် ခေါ်ဗဏီကျောင်းတိုက် မန္တလေးမှ ဦးတိက္ခဥာဏ ကို မန္တလေး ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသို့ အရေးပေါ်ပို့ဆောင်ခြဲ့ပီး မုံရွာမြို့မှ ရွှေဂူကျောင်းတိုက်မှ ဦးသဇ္ဖနနှင့် ပခုက္ကူ အလယ်တိုက် ၊ မန္တလေးကျောင်းမှ ဦးစန္ဒောဘာသ ၊ တို့ကို မုံရွာပြည့်သူဆေးရုံကြီးတွင် ခွဲစိတ်ကုသခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ကြည့်ရတာ စိတ်မကောင်းဖူး သေရာပါဒဏ်ရာ ဖြစ်သွားပါပြီ
ဘယ်သူတွေ တာဝန်ယူမလဲ?? ဘယ်သူတွေ တာဝန်ရှိလဲ????
"အခုချိန်ထိ ဆေးရုံကို ဘုန်းကြီးတွေထပ်ရောက် လာကြတယ် ခွဲစိတ်ခန်းဝင်တဲ့ ကိုယ်တော် ၂ ပါးမှာ တစ်ပါးက မျက်စိကိုထိတယ် ၊ တစ်ပါးက မီးလောင်ဒဏ်ရာပြင်းထန်လို့ ခွဲစိတ်ခဲ့ရတယ် ၊ အခုမုံရွာဆေးရုံကြီးမှာ သံဃာတော် အပါး ၃၀ကျော် လောက်ဆေးကုသခံနေရတယ် ၊ သပိတ်စခန်းမှာ ပျောက်နေတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေလည်းရှိတယ် အဖမ်းခံရတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေလည်းရှိနေတယ် " ဟု မုံရွာ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် ဆေးကုသမှုခံယူနေသည့် သံဃာတော်များကပြောသည်။
ကျော်သူ(တိုက်ရိုက်ပေးပို့သည်)Yangon Media Group
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းအတွင်းရှိ သပိတ်စခန်းများ မြင်ကွင်း
လက်ပံတောင်း အရေးပေါ်သတင်း ၁၂ ကရုဏာမြင့်မိုရ် လူမှုကူညီရေးအသင်းနှင့် ကျောင်းသားသမဂ္ဂမှ ကားများ ရောက်ရှိလာပြီး ဒဏ်ရာရရှိသူများကို နီးစပ်ရာ ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်နေလျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ မုံရွာဆေးရုံသို့ လက်ပံတောင်းမှ လူနာတင်ယာဉ် တစ်စီး ဆိုက်ရောက်လာကြောင်း တာဝန်ကျ သူနာပြုဆရာမ တစ်ဦးက အတည်ပြုပြောကြားသည်။ သို့သော်လည်း ဒဏ်ရာရရှိသူများစွာ ကျန်ရှိနေပြီး လူနာတင်ယာဉ် လောက်ငမှု မရှိသေးကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ မျက်ရည်ယိုဗုံးများ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ထားသော ဧရိယာအတွင်း မီးလောင်ကျွမ်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေသည်ကို တွေ့ရစဉ် ....
သတင်းမီဒီယာများ၏ ကားနှင့် အများပြည်သူများ၏ ဆိုင်ကယ်များအား မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းနှင့် ထိုသို့ မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့သည့် အချိန်မှာ မျက်ရည်ယိုဗုံးများဖြင့် စတင် ဖြိုခွင်းခဲ့သည့် အချိန်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဖောင်းကားတောင်ရွာဘုန်တော်ကြီးကျောင်းမှ ဒဏ်ရာအပြင်းအထန်ရရှိသူသံဃာ ၆ ပါးနှင့် လူတစ်ဦးရှိနေပြီး ဖြိုခွင်းမှုကြောင့် ပိတ်မိနေသောအဖွဲ့များ ဖောင်းကားဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ပြန်လည်စုစည်းမိကြပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရသည်။ လယ်တီဆရာတော်ဘုရား၏ သိမ်နေရာမှ သပိတ်စခန်းမှာ နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ နံနက် ၅ နာရီအချိန်အထိ အဆက်အသွယ်မရသေးကြောင်း၊တောင်ကြားနှင့် ဆည်တည်းစခန်းမှ သပိတ်အဖွဲ့တို့အား ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ခြိမ်းခြောက်ပြီးပြန်ခိုင်းခဲ့ကြောင်း EMG သတင်းထောက်၏ သတင်းပေးပို့ချက်အရ သိရသည်။
၀မ်ပေါင် ကုမ္ပဏီထဲတွင် ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင် သံဃာတော် (၆)ပါးကို ဖမ်းဆီးထားကြောင်း သတင်းအတိအကျ ရရှိပါသည်။ ၀မ်ပေါင် ကုမ္ပဏီရှေ့ရှိ သပိတ်စခန်းမှ အပြင်းအထန် ဒဏ်ရာရရှိသော သံဃာတော် အရေအတွက်မှာ (၅)ပါး ဖြစ်ကြောင်း ထပ်မံ သိရှိရပါသည်။
"အခွင့်အရေး ယူသူတွေ ရှိနေရတာဟာ အခွင့်အရေး ပေးသူတွေ ရှိနေလို့သာ ဖြစ်ပါတယ်"
‎ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၈။
ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ အပါအ၀င် အငြိမ်းစားပုဂ်္ဂိုလ် ၆၉ ဦး၊ နိုင်ငံတော် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးသူများနှင့် အစိုးရသစ် ပြည်ထောင်စုအဆင့် တာဝန်ရှိသူ ၁၀၂ ဦးတို့၏ အိမ်အကူ၊ ထမင်းချက်နှင့် ဥယျာဉ် လုပ်သားများအတွက် ထောက်ပံ့ငွေအဖြစ် ကျပ်သန်းပေါင်း ၃၅၀ ကျော်ကို ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်မှ ခွင့်ပြုထားကြောင်း လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အချို့က ပြောကြားသည်။
“ခွင့်ပြုပြီးသား ငွေက ကျပ်သန်းပေါင်း ၃၅၁ ဒသမ ၀၁၀ သန်းပါ၊ ထပ်မံ တောင်းခံတာက အငြိမ်းစား ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေအတွက် ၁၆၉ ဒသမ ၅၆ သန်းနဲ့ တိုင်းရင်းသား ရေးရာဝန်ကြီးတွေအတွက် ၂၇ ဒသမ ၄၉၂ သန်းဆိုတော့ စုစုပေါင်း ၁၉၇ ဒသမ ၀၅၂ သန်းပါ” ဟု ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးမင်းသူက
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း အနီးဝန်းကျင်ရှိ သပိတ်စခန်းများအား နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့ ည ၁၂ နာရီ နောက်ဆုံးထား ဖယ်ရှားပေးကြရန် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက ၂၈ ရက်နေ့ည ၈ နာရီ ၅၀ မိနစ်အချိန်က အသိပေး ပြောကြားနေစဉ်(Eleven)
လက်ပန်းတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းရေးအတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်မြို့ပေါ်မှာ ဒေသခံ (၃ဝ) ကျော်ဟာ ဒီကနေ့ မနက်ပိုင်းက ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။ လက်ပန်းတောင်းတောင်ကြီး ပျောက်ကွယ်ပြီး သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှာကို မလိုလားတဲ့တွက် အခုလို ဆန္ဒပြရတာလို့ ဒီပွဲကို ဦးဆောင်တဲ့ ဦးမြင့်စိုးက RFAကို ပြောပါတယ်။
ဒေသခံတွေဟာ ပိတ်ကားတွေပေါ်မှာ စီးပွားရေးအကြမ်းဖက်မှု ရပ်တန့်ရေး စာတန်းထိုးပြတာတွေ၊ လပ်ပန်းတောင်းတောင် ပျက်စီးနေတဲ့ ရုပ်ပုံတွေကို ပြသတာတွေ၊ လက်ပန်းတောင်းတောင် ရပ်တန့်ရေးဆိုပြီး ကြွေးကြော်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။
တစ်ချိန်တည်းမှာဘဲ ကြေးနီတောင်စီမံကိန်းဒေသက တရုတ် ဝမ်ပေါင် ကုမ္ပဏီဝင်းထဲမှာ လုံခြုံရေး အင်အား(၇ဝဝ)ခန့် ချထားတာတွေ့ရတယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံ ဝိဇ္ဇာ၊ သိပ္ပံတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများအဖွဲ့မှ တာဝန်ခံ ကိုသောင်းထိုက်က ပြောပါတယ်။
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ဧရိယာအတွင်း မြင်ကွင်းအား နိုဝင်ဘာလ ၂၈ရက်နေ့ ည၇နာရီ ၃၀မိနစ်အချိန်က မြင်တွေ့ရစဉ်(Eleven)
ဒီကနေ့ မနက်ပိုင်းမှာ မုံရွာမြို့ပေါ်က သံဃာတော် အပါး(၇ဝ)ခန့် ထပ်မံရောက်ရှိလာပြီး ညနေပိုင်းမှာတော့ မန္တလေးနဲ့ ပခုက္ကူမြို့က သံဃာတော်တွေနဲ့ ရေစကြိုမြို့က နိုင်ငံရေး အင်အားစုတွေ ရောက်ရှိလာပြီး ဒေသခံတွေနဲ့ လာရောက်ပူးပေါင်းကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ တိုက်ပွဲဝင် သပိတ်စခန်းများအရေး ဗကသများအဖွဲ့ချုပ်(ဗဟိုလုပ်ငန်းကော်မတီ)နှင့် မုံရွာခရိုင် ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ ပူးတွဲကြေညာချက်
နာနတ်သီးမှာ ဗီတာမင်စီ မြင့်မားစွာ ပါဝင်တဲ့ အပြင် ကယ်လ်စီယမ်၊ ပိုတက်စီယမ်နဲ့ အမျှင် ဓာတ်တွေ အများအပြား ပါရှိပြီး အဆီနဲ့ ကိုလက်စထရော အနည်းငယ်သာ ပါရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဘရိုမီလိန်း လို့ခေါ်တဲ့ အင်ဇိုင်း ပါဝင်ပြီး အဲဒီအင်ဇိုင်းဟာ အစာခြေ မှုကောင်းစေပြီး ခန္ဓာကိုယ်မှ နာကျင်တာနဲ့ ရောင်ရမ်းတာကို တွန်းလှန်နိုင်တဲ့ ဒြပ်ပေါင်း တွေကို ထုတ်လုပ်စေ ပါတယ်။ လေ့လာမှုတွေအရ ဘရိုမီလိန်း ဒပ်ပေါင်းဟာ ဒူးခေါင်း အရိုးအဆစ်ရောင် နာနဲ့နာကျင်မှုဝေဒနာပျောက် ကင်းဖို့အတွက် ထိထိရောက်ရောက် အကျိုး ရှိတယ်လို့ သိရပြီး စတီးရွိုက် မပါဝင်တဲ့ ရောင်ရမ်းမှု ပျောက်ဆေးလိုမျိုး အသုံးပြုနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Myawady Health, အင်တာနက်စာမျက်နှာမှ
လက်ပံတောင်းတောင် စီမံကိန်းရှေ့က သပိတ်စခန်း မြင်ကွင်း (ရုပ်သံ)
လက်ပံတောင်းတောင်သ ပိတ်စခန်းများ ဖျက်သိမ်းရန် ပြည်ထဲရေး သတင်းကြေညာချက် ထွက်ပြီးနောက် နိုဝင်ဘာ ၂၇ ရက် ညပိုင်း စီမံကိန်းရှေ့က သပိတ်စခန်း မြင်ကွင်း (ရုပ်သံ)
video by - DVB TVCopy ,from - drlunswe.blog
ဖုန်း အင်တာနက် အသုံးပြုခ စရိတ်စက ကြီးမြင့်မှုကြောင့် ပြင်ဆင်လျော့ချပေးဖို့ စုဝေးတောင်းဆိုရန်ပြင်ဆင်.....
လက်ရှိပြင်ဆင်လိုက်သော ဖုန်း အင်တာနက် အသုံးပြုခ ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ခြင်း ကို ပြည်သူ့ သက်သာချောင်ချိရေး အတွက် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးခြင်း မရှိပါက၊ ................ ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက် ( စနေ) နေ့တွင် ရန်ကုန် မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး ရုံးချုပ် အရှေ့ ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်ခြင်း အခမ်းအနားကြီး အား တရားဝင် ခွင့်ပြုချက် တောင်းဆိုကာ လူထု လှုပ်ရှားမှုကြီး တခု ဖေါ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ဆက်သွယ်ရေး စရိတ်စက ကြီးမြင့်မှုကြောင့် အခက်ကြုံ ကျပ်တည်းလာသော ပြည်သူ့တို့ ဘက်မှ ကာကွယ်ရပ်တည်ပြီး ပြင်ဆင်လျော့ချပေးရန် နစ်နာဆုံးရှုံးသော နည်းပညာ သုံးစွဲသူ အပေါင်းက ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေး တောင်းဆိုကြမည်ဖြစ်ပါသည်။
နေမျိုးဇင် (09 49328559)
ယနေ.နံနက် လက်ပတောင်းတောင်ဒေသ၊ ၀မ်ပေါင်ရုံး
ယနေ့ ၀မ်ပေါင်ရုံးအတွင်းမှ ရဲများဖြင့် အင်အားပြ ဖြဲခြောက်ပြီ မီဒီယာသမားများ ၁၄၄ ပုဒ်မ ထုတ်လိုက်ပြီ ဖြစ်သဖြင့် ထွက်သွားပေးရန် ဂေါ်လံကြီးဖြင့် အာဖြဲသံကြီးနဲ့ အော်နေပါသည်။
Posted and Photo by Aung Nay Myo
၀မ်ပေါင်ကုမ္ပဏီ ၀င်းအတွင်း မုံရွာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် "ဆုတ်..တက်" "ဆုတ်....တက်" ဟု သံပြိုင်ရွက်ဆိုပြီး နံပါတ်တုတ်များဖြင့် ဒိုင်းများကို ရိုက်ကာ စစ်ရေးပြနေလျက်ရှိသည်။
လက်ပံတောင်း ကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီမှ ကြေငြာချက် ထုတ်ပြန်ရာတွင် အခု ဆန္ဒပြနေခြင်းသည် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြခြင်းဖြစ်သောကြောင့် အကြမ်းဖက် နည်းဖြင့် နှိမ်နင်းဖြိုခွဲပါက လက်ရှိအစိုးရ၏ တာဝန် သာဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာချက် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
သတင်းရင်းမြစ် - အင်တာနက်စာမျက်နှာသတင်း ကူးယူခဲ့ပါသည်။
နိုဝင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၂၊ ရန်ကုန်
ရဲလင်း တပ်ရင်း ၂၀၄-၂၀၅ ( ABSDF) ရဲဘော်ဟောင်း နှင့် ကျန် ၅ ဦး ကို ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့ ပန်းပဲတန်း တရာရုံးမှာ ရုံးထုတ်မယ်၊ ကျွန်တော်တို့ ရဲဘော်တွေကို ရဲစခန်းက ပုဒ်မ(၁၈)လို့ ပြောပြီး ညာခေါ်တာ ဖြစ်ပါတယ်...တရားရုံးရောက်တော့ အာမခံမရတဲ့ ပုဒ်မ(၅၀၅/ခ)နိုင်ငံတော် မထိမျက်မြင်ပြုမူ့ နဲ့တရားစွဲပြီး အခု အင်းစိန်ထောင်ကို ခေါ်သွားပါပြီ။
လက်ရှိပါသွားသူတွေက- ... (၁)ကိုရဲလင်း (၂) ဝေဠု (၃) ကိုမျိုးချစ် (၄) ကိုညီညီ (၅) ဒေါ်နော်အုံးလှ (၆)ဒေါ်ရှမ်းမ..တို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဟန်ဝင်းအောင် ၊ အောင်နိုင်သူ ၊ မိုးသွေး ၊ သီဟ၀င်းတင် တို့ကတော့ တရားစွဲခံရ ပေမဲ့ အခုချိန် လွတ်မြောက်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်... ရဲစခန်းကို လိမ်လည်ခေါ်ပြီး ပုဒ်မပြောင်းပြီး ဖမ်းဆီးတရားဆွဲတာဟာ ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ အစိုးရများရဲ့လုပ်ရပ် မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ဟာ နိုင်ငံတော်ကို ဆန့်ကျင်သူများ မဟုက်ပါ ဦးပိုင်ကုမ္မဏီကိုသာ ကန့်ကွက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည် နိုင်ငံတော် တစ်ကယ်ပြုပြင် ပြောင်းလဲမည် ဆိုပါက လူငယ်တွေကို အစိုးရမှ စည်းရု့းံ စေချင်ပါသည် သူတို့ကို ၃-၁၂-၂၀၁၂ ရက်နေ့ ပန်းပဲတန်း တရာရုံးမှာ ရုံးထုတ်မယ်)
Copy from - skyheartwinko,facebook
အင်တာနက် မသုံးပါနဲ့လို့ မတားဘူး...????? .... ပိုက်ဆံကိုတော့ တိုးတောင်း ....
MPT အကြောင်း သိကောင်းစရာ..
ဖုန်းအင်တာနက်ကို အသုံးပြုပြီး Facebook သုံးမယ်ဆိုရင် ပုံမှန်အားဖြင့် ဖုန်းထဲက Facebook ဆော့ဖ်ဝဲလ်က ကိုယ့် wall ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ ပုံတွေရော၊ စာတွေရော ဖော်ပြပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်မိနစ်ကို 1MB နှုန်း data သုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ MPTက ယာယီ သတ်မှတ်ထားတဲ့ နှုန်းနဲ့ဆို ဖုန်းအင်တာနက်နဲ့ Facebook သုံးလိုက်ရင် တစ်မိနစ်ကို ၂ဝ ကျပ် ကျမှာဖြစ်ပါတယ်။ နာရီဝက် ဖေ့ဘုတ်ခ်သုံးရင် ၆ဝဝ ကျပ် ကျသင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖုန်းအင်တာနက်ကို အသုံးပြုပြီး Viber ပြောမယ်ဆိုရင် တစ်မိနစ်ကို 240Kb နှုန်း data သုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ MPTက ယာယီ သတ်မှတ်ထားတဲ့နှုန်းနဲ့ဆို ဖုန်းအင်တာနက်နဲ့ Viber ပြောလိုက်ရင် တစ်မိနစ်ကို5ကျပ်ကျမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖုန်းအင်တာနက်ကို အသုံးပြုပြီး Skype နဲ့ video call ပြောမယ်ဆိုရင် တစ်မိနစ်ကို 6MB နှုန်း data သုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ MPTက ယာယီ သတ်မှတ်ထားတဲ့နှုန်းနဲ့ဆို ဖုန်းအင်တာနက်နဲ့ Skype ပြောလိုက်ရင် တစ်မိနစ်ကို ၁၂ဝ ကျပ် ကျပါလိမ့်မယ်။
ဒီအတိုင်းသာဆို ဖုန်းကတ် တစ်သောင်းကတ်ကို အလွန်ဆုံးမှ ငါးနာရီလောက်ပဲ သုံးရမယ် ထင်ပါရဲ့.. ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီး ရွှေဥာဏ်တော် စူးရောက်ပုံကတော့ ပြောမနေနဲ့.. အင်တာနက် မသုံးပါနဲ့လို့ မတားဘူး... ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေမူကြမ်းထုတ်တယ်.. ခုလို ပိုက်ဆံ တိုးတောင်းတယ်.. လက်တော့ပ်လေးတွေ ကိုင်ပြီး ဆန္ဒထွက်ပြရမယ့် ကိန်းတောင် ဆိုက်နေပြီ.. >.<
မယ် ပိုး, အင်တာနက်စာမျက်နှာသတင်းမှ